Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJay And Shauna
Iigadi zaseRaintree zibekwe ngokulula ngaphaya kolwandle oludumileyo lwaseAudry. Iivenkile kunye neendawo zokutyela ngaphakathi komzuzu we-10 okanye ukuhamba ngaphantsi. Idesika enkulu egqunyiweyo inika umbono omangalisayo wolwandle kwaye nceda uzive ukhululekile ukuzulazula egadini ukuze ufumane iziqhamo ezitsha kunye nemifuno. Iyadi ebanzi ilungile kubantwana. Siyavuya ukubonelela ngezothutho kwisikhululo seenqwelomoya uhambo olubuyayo!
Indlu inelinye lamakhitshi amakhulu oza kuwafumana apha esiqithini ukuze abo bathanda ukupheka uzive usekhaya. Isitovu segesi esigcweleyo esineoveni kunye nefriji enefriji. Kukho indawo yokutyela ephangaleleyo kunye negumbi lokuhlala kunye nedesika egqunyiweyo ngaphambili ukonwabela impepho ngombono wolwandle oluqaqambileyo lwepacific. Sisebenza ngamandla elanga apha ke siyakucela nje ukuba ungasebenzisi naziphi na izomisi zinwele okanye izixhobo ezivelisa ubushushu njengoko oku kuya kuphelisa inkqubo ngokukhawuleza. Nangona kunjalo abalandeli, izibane, ifriji kunye nezinye izinto zombane aziyongxaki kodwa nceda ukhumbule ukucima zonke iifeni, izibane kunye naziphi na ezinye izixhobo xa zingasetyenziswa. Awunakufumana isivumelwano esingcono eMatei ngendlu egqibeleleyo yokulala enekhitshi eligcweleyo, i-wifi, iishawa ezishushu, abalandeli besilingi, amandla elanga elanga angama-24, iimbono ezinkulu zolwandle kunye neekayaks kunye neebhayisekile zonke zibandakanyiwe! Yiba ngowokuqala ukonwabela i-suite entsha yokulala eyinkosi esisanda kuyongeza.
I-Matei yidolophu encinci yaselwandle eneevenkile kunye neendawo zokutyela ezimbalwa, zonke ziphakathi komgama wokuhamba ukusuka endlwini. Iimbono ezimangalisayo, iilwandle zesanti emhlophe, iingxangxasi kunye nabanye abona bantu banobuhlobo emhlabeni bonke benza iTaveuni ibe ngamava angenakulibaleka. Iibhayisekile ziyindlela entle yokujikeleza indawo yendawo kwaye ujonge iilwandle ezintsha okanye iilali. Kukho iziqithi ezi-4 ezincinci ngaphesheya kwesitrato ukusuka kwindlu apho unokuthatha i-kayaks ukuze uhlole. Kwisiqithi sesithathu uya kufumana unxweme oluhle lwesanti emhlophe ukuze utsale kwaye ube nepikiniki okanye uphumle nje, uya kuqiniseka ukuba unayo yonke into kuwe. I-snorkeling esuka apha nayo intle kakhulu!
Umbuki zindwendwe ngu- Jay And Shauna
Abakhathaleli bethu abamangalisayo uRobert noVinna baya kuhlala befumaneka kuyo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho kwaye baya kuza ngeentsuku ezimbalwa ukwenza ucoceko olukhawulezayo, utshintshe iilinen kunye nokuzisa iitawuli ezintsha. Bangakuvuyela ukukunceda ekulungiseleleni nayiphi na imisebenzi ngexesha lokuhlala kwakho njengokuhamba intaba, ukubukela iintaka, ukusefa, ukuntywila emanzini, okanye ukuntywila emanzini. IVinna ikwabonelela ngokutya okuphekwe ekhaya okumnandi okuziswe emnyango wakho kunye nokuphululwa kumgangatho ngamaxabiso amahle.
Abakhathaleli bethu abamangalisayo uRobert noVinna baya kuhlala befumaneka kuyo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho kwaye baya kuza ngeentsuku ezimbalwa ukwenza ucoceko…